Agoomaha Af Urur, Suuj, Garmaal iyo Garacad oo la Ciidsiiyey (dhegayso + sawirro) – Radio Daljir
Juunyo 22, 2017 7:15 g 0
Guddi dhalinyaro oo uu hugaaminayey Gudoomiyihii hore ee Gobalka Mudug ayaa caawa ciidsiiyey agoon Soomaaliyeed iyo carruurtii ay ka geeriyodeen mujaahidiintii dagaaladii Alshabaab ee Suuj, Garmaal, Garacad, iyo Af Urur.
Xaflada carruurta agoonta ah oo gaaraya 500 lagu ciidsinayeey waxaa lagu qabtay magaladda Garowe ee caasimada Puntland, waxaana xusid mudan in Idacadda Daljir ay qaybta ugu weyn ka qadatay arurinta lacagta lagu ciidsinayo agoonta ka kala timid Garoowe, Gaalkacyo, Buuhoodle, Burco, Garacad, Bossaso, Kismayo, Muqdisho, Baydhabo, Jalam, Boocame, Waaciya, Af Urur, Bookh, Suuj, iyo Eyl.
Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo kamid ah culumada Puntland ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha isaga oo ka hadlay ka farxinta caruurta agoonta ah.
Fartuun oo kamid ahayd Guddiga aruurinta lacagta lagu ciidsiyeey agoonta ayaa sheegtay in barnaamijkan ay ka soo shaqeynayeey mudo badan, waxayna uga mahadcelisay goobta dhalinyaradii kala shaqeynaysay aruurinta lacagta.
Cabixakiin Xuseen Xasan oo ku hadlayeey afka Radio Daljir ayaa sheegay in Daljir ay ku faraxsantahy in ay ka qaybqadato ciidsiinta carruurta agoonta ah ee ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka ah.
Warbixinta hoose waxaa Garoowe ka soo diray Maxamed Lakiman.